BUDDHIST TERMS' Dictionary: OBJECT OF VOLITIONAL ACTIVITIES - ကမ္မနိမိတ္တ
OBJECT OF VOLITIONAL ACTIVITIES - ကမ္မနိမိတ္တ
OBJECT OF VOLITIONAL ACTIVITIES Kamma nimitta
ကမ္မနိမိတ္တ - ကမ္မနိမိတ်၊ ကံပြုစဉ်က တွေ့ကြုံခဲ့ရသော အာရုံ။
စေတီတည်ထားကိုးကွယ်ရာ၌ ကုသိုလ်စေတနာသည် ကံမည်၍ ထိုကုသိုလ်စေတနာကံ၏ အာရုံဖြစ်သော စေတီဒြပ်သည် ကမ္မနိမိတ်မည်၏။ ကျွဲ, နွားစသည်တို့ကို သတ်ဖြတ်ရာ၌ အကုသိုလ်စေတနာသည် ကံမည်၍ ထိုအကုသိုလ် စေတနာကံ၏ အာရုံဖြစ်သော ကျွဲ, နွားဒြပ်စသည်သည် ကမ္မနိမိတ် မည်၏။
ယင်းကမ္မနိမိတ်သည် ဥပလဒ္ဓနိမိတ်နှင့် ဥပကရဏ ကမ္မနိမိတ်ဟူ၍ ၂-မျိုး ရှိ၏ -
(၁) ဥပလဒ္ဓကမ္မနိမိတ် - ပြုလုပ်သောကုသိုလ် အကုသိုလ်တို့၏ ပဓာနဖြစ်သော အာရုံ၊
(၂) ဥပကရဏကမ္မနိမိတ် - ပြုလုပ်သော ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်တို့၏ အခြံအရံဖြစ်သော အာရုံ။
The object of an action that reappears to the doer at his last moment
While worshippingashrine, the wholesome volition is kamma and the image of the shrine seen in one’s vision asaresult of that wholesome action is kamma nimitta. Similarly, while slaughtering cattle, the unwholesome volition is kamma and the image of the cattle seen in one’s vision is kamma nimitta.
Kamma nimitta is of two kinds:
(1) main vision caused by one’s wholesome or unwholesome kamma, Upaladdha kamma nimitta;
(2) supplementary vision caused by one’s wholesome or unwholesome volitions, Upakarana kamma nimitta.